MSF oo ku baaqday in loo gurmado Tahriibayaasha ku xiran Liibiya • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / MSF oo ku baaqday in loo gurmado Tahriibayaasha ku xiran Liibiya
MSF oo ku baaqday in loo gurmado Tahriibayaasha ku xiran Liibiya
June 5, 2019 - By: Hanad Askar
Hay’ada Dhakhaatiirta aan xaduuda lahayn MSF ayaa bayaan ay soo saartay ugu baaqday dowladaha Midowga Yurub inay u gurmadaan tahriibayaasha ku xiran dalka Liibiya.
MSF ayaa sidoo kale ku baaqday in EU-da ay joojiyaan lacagta ay siiyaan ciidamada badda ee dowlada Liibiya oo qaab xun ulla dhaqma dadka muhaajiriinta ah oo ay ku jiraan dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo hada ku xiran xabsiyada dalka Liibiya.
Warbixinta MSF ayaa looga hadlay jirdilka iyo gaboodfalada kale oo ay ciidamada Liibiya ay u geystaan Tahriibayaasha ay ku hayaan xabsiyada, waxaana la sheegay xaalada ay hada kasii dartay tan iyo intuu dagaalka ka bilowday nawaaxiga caasimada Liibiya ee Tripoli.
Shir jaraa’iid oo uu qabtay madaxa MSF ee dalka Liibiya Sam Turner ayaa salaasadii shalay sheegay in xalka kaliya ee loogu gurman karo tahriibayaasha ay tahay in loo soo qaado dalalka Yurub, isagoo sheegay in dhalinyaradaasi naftooda halis ku jirto.
“…Waxaanu codsaneynaa gargaar bini’aadamnimo oo deg deg ah in loo fidiyo tahriibayaasha xiran…” ayuu yiri Mr.Turner.
Tahriibayaasha hada ku xiran xabsiyada Tripoli ayaa la sheegayaa inay gaarayaan 6-kun kuwaasi oo ku xiran xabsiyo ku yaal nawaaxiga goobaha ay dagaalada ka socdaan, halka ay jiraan tiro kale oo badan oo gacanta ugu jira kooxaha burcada ah ee loo yaqaan “Magafayaasha”.